Ranesa Firiana: “Fehezin’ny lalàna ny fahafahana” | NewsMada
Ranesa Firiana: “Fehezin’ny lalàna ny fahafahana”
“Fehezin’ny lalàna ny fampiasan’ny tsirairay ny fahafahana. Noho izany, tsara ny mametra hoe misy ny fahafahana ary mipetraka ny fahafahana maneho hevitra fa tsy natao fanararaotana akory izay fahafahana izay ka ilazana hoe tsy misy fetra ny fahafahan’ny tsirairay ka afa-manao izay tiany hatao” hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana. Ny fehezan-dalàna famaizana no mametra ny tombon-jo tsy azo enjehina ho an’ny parlemantera sy ny fahafahan’ny mpanao gazety. Ohatra amin’izany ny fanentanana ny olona hidina an-dalambe, ny fanentanana olona hankahala ny governemanta, ny fanentanana hanongam-panjakana… Azo anaovana fanenjehana eo anoloan’ny fitsarana izany.
Azo enjehina amin’ny fitsarana izay manao fahadisoana
“Raha any amin’ny haino aman-jery, ohatra, no misy solombavambahoaka na olona manao fahadisoana ka heloka mifanaraka amin’ny fehezan-dalàna famaizana ny fahadisoana ataony: azo enjehina tsara manoloana ny fitsarana izy amin’izay fotoana izay”, hoy izy.
Amin’izay fotoana izay, rehefa mankany amin’ny hoe fehezan-dalàna famaizana no mihatra, misy sazy ara-pitsarana sy figadrana ao anatin’izay rehetra izany. Eo no ilàna fitandremana ho an’ny mpanao politika sy ny mpaneho hevitra rehetra hoe: aza variana fotsiny hoe malalaka ny fanehoan-kevitra. Mazava ny voalazan’ny lalàmpanorenana: raha misy mpikamban’ny Antenimiera iray, solombavambahoaka na loholona, ohatra, manao ny asany ao anatin’ny fanaovan-dalàna, manana ny zo tsy azo enjehina izy amin’izany.